काका र फुचुंग्री २०७१ मंसिर ६ | Saugat : Naya Yougbodh
काका र फुचुंग्री २०७१ मंसिर ६
फुचुंग्री : हाम्रो देशको सरकार पनि कस्तो पानीमरुवा रै’छ हगि काका ? एउटा मन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भयो भन्छन् । अर्काले त्यो मन्त्रीको भनाई नै अनधिकृत हो भन्छन् । कुरा नै नबुझिने भो नि?
काका : सबैका आ–आफ्नै ताल छन् फुच्ची । कसका कुरा पत्याउनु कसका कुरा नपत्याउनु ? दुबै सरकारका मन्त्री नै हुन् क्यारे । अब एकैपटक मोदी जनकपुर गए भने एउटा अनधिकृत, नगए अर्को अनधिकृत । मोदी आएपछि नै छिनोफानो हुने भो फुच्ची ।
फुचुंग्री : अनि जनकपुरमा पनि मोदीको तानातान पो छ रे काका । कसैले बाह्रबिघा मैदानमै मोदी आउनुपर्ने भन्छन् अरे । कसैले चाहिँ के ? नारा जुलुससम्म भैगो रे त ?
काका : खै कुन्नि फुच्ची ? तेरा अंकलहरु किन यति मरिहत्ते गर्छन् कुन्नि ? सार्क राष्ट्रका अरु देशका प्रमुखहरु पनि आउँदैछन् । हाम्रा नेपालीहरुलाई चाहिँ मोदीकै चिन्ता छ । गर्नु पनि के ? आखिर प्रभु उनै परे !
फुचुंग्री : अनि हाम्रा बैद्यबाले प्रचण्ड अंकलसँग पार्टी फुटाउनु भाथ्यो । फेरि त्यताबाट पनि विप्लव अंकलले अर्को पार्टी बनाउन थाल्नु भएछ । विप्लव अंकलले त फेरि ठोक्नेका कुरा पो गर्नुहुन्छ रे नि ?
काका : तेरा नेपालका कम्युनिष्ट अंकलहरु पनि यसैगरी सकिने भए फुच्ची । हुँदा खाँदाको पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउँछन् अनि नामचाहिँ “एकीकृत” राख्छन् । कमिलाको प्वाँख पलायो भने बिलाउँछ भन्छन् । त्यस्तै भाको त होला नि । अनि तेरा विप्लव अंकल चाहिँ हान्ने र ठोक्नेमै छन् अरे । म बूढालाई पनि यै अचम्म लाइरा’छ ।
फुचुंग्री : अनि हाम्रा सभासद् र पार्टीका नेता अंकलहरु त विभिन्न बखेडा झिकेर आजभोलि त ठण्डाराम भएर पो बसेका छन् त काका । यिनीहरुले संविधान बनाउँदैनन् कि क्या हो ?